अ to्ग्रेजीबाट गुजराती अनुवाद – Vocre
अ to्ग्रेजीबाट गुजराती अनुवाद
गुजराती भारतभर बोल्दछ, र यो गुजरातको आधिकारिक भाषा हो, गुजराती मानिसहरूले बोलेका. Find out how to translate English to Gujarati for business, स्कूल, वा यात्रा.
अंग्रेजीबाट गुजरातीमा अनुवाद खोज्दै? तपाईं सिक्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ कि व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांश वा आवश्यक छ शिक्षा अनुवाद, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.
गुजराती भारतभर बोल्दछ, र यो गुजरातको आधिकारिक भाषा हो, गुजराती मानिसहरूले बोलेका. यो इण्डो-आर्य भाषा पुरानो गुजरातीबाट आएको हो 1100-1500 यो, यसलाई बनाउँदै 700 वर्ष पूरानो. यो दादरामा पनि बोलिन्छ, दमन, डुई, र नगर हवेली, where it’s also the official language.
यो भारतमा छैठौं सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हो. धेरै 4% भारतको यो भाषा बोल्छ, र अधिक 55 million people speak Gujarati all over the world.
भाषा पनि पाकिस्तान भर केही हदसम्म बोलिन्छ, र यो पश्चिमी संसारमा गुजराती समुदायहरूमा बोल्छ, including the U.S.
अन्य देशहरू जहाँ गुजराती बोल्दछन्:
अ Gujarati्ग्रेजीलाई गुजरातीमा अनुवाद गर्नु केही अन्य भाषाहरूको तुलनामा मुश्किल हो. गुजरातीको मुख्य बोलीहरू समावेश छन्:
पूर्वी अफ्रीकी गुजराती
यो भाषाले अन्य भाषाहरूबाट केहि शब्दहरू लिएको छ, सिक्नको लागि केही शब्दहरू थोरै सजिलो बनाउँदै. हामी अंग्रेजीबाट गुजरातीमा तपाईंको स transition्क्रमण सजिलो बनाउनको लागि यी शब्दहरू सिक्न सिफारिस गर्दछौं. केहि शब्दहरू जुन तपाईले रोमान्स र जर्मन भाषाबाट चिन्न सक्नुहुनेछ:
गुजरातीमा धेरै स्वरहरू छन् र यसले लगभग समावेश गर्दछ 10 स्वर फोनमहरू (स्वर जसले शब्दको अर्थ बदल्छ).
गुजराती अनलाइन सिक्ने कोशिश गर्दै? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं जुन गुजराती अनुवाद उपकरण छ र सजिलैसँग भाषणमा पाठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
अंग्रेजी गुजराती अनुवादकहरू र अनुवाद सेवाहरू प्राय: प्रायः चार्ज गर्दछन् $50 एक घण्टा. यदि तपाईं सरल पाठ अनुवाद गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, हामी एक भाषा अनुवाद सफ्टवेयर कार्यक्रम वा अनुप्रयोग मा पाठ inputting सिफारिश.